Daawo Sawirrada: Kulankii Aqalka Cad ku dhexmaray Trump iyo Obama oo lagu sheegay in uu ahaa kii ugu…. | Kismaayo24 News Agency
Daawo Sawirrada: Kulankii Aqalka Cad ku dhexmaray Trump iyo Obama oo lagu sheegay in uu ahaa kii ugu….
Friday November 11, 2016 - 1:22 under Somali News by Tifaftiraha K24
Kulankan ayaa la sheegay inuu qaatay ku dhowaad 90 daqiiqo. Sidoo kale waxaa booqashada ku weheliyey Mr. Trump xaakiisa Melania Trump, waxaana soo dhoweysay Michelle Obama.
Labada nin ayaa diiday inay wax su’aalo ah ka jawaabaan markii saxaafadda loo oggolaaday qolka ay ku shirayeen.
Kulankaasi kadib ayaa labada nin waxay si kooban ula hadleen saxaafadda. Madaxweyne Obama oo ugu horrayn hadlay ayaa sheegay inuu wadahadal wanaagsan la yeeshay Mr Trump. Waxa uu sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirrada ay ka shaqayn doonaan sidii xil wareejinta ay ugu fududaan lahayd Mr Trump iyo maamulkiisa.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu doonayo in Mr Trump uu guulaysto, waxaana uu intaas ku daray in haddii Mr Trump uu guulaysto ay ka dhigan tahay Maraykanka oo guulaystay.
Dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay Mr Trump oo sheegay in waqtiga ay kulmeen ay ka wada hadleen qodobo kala duwan oo iskugu jira kuwo adag iyo kaleba. Waxa uu sheegay in shirkaasi uu socon karay muddo dheer, isgaoo muujiyey inuu xiiso lahaa. Waxa uu sheegay inuusan horey ula kulmin Mr Obama balse uu ka filayo Obama talooyin mustaqbalka.
Mr Trump ayaa sidoo kale ku tilmaamay Mr Obama inuu yahay nin wanaagsan.
Intii uu socday ololihii doorashada, ayaa Mr Trump waxa uu wacad ku maray in uu meesha ka saari doono dhaxalka uu ka tegayo Obama, asagoona horay su’aal u geliyay in madaxweynahaasi uuba ku dhashay Maraykanka.
2 thoughts on “Daawo Sawirrada: Kulankii Aqalka Cad ku dhexmaray Trump iyo Obama oo lagu sheegay in uu ahaa kii ugu….”
Hani Bashiir Fiyambaro 11th November 2016 at 2:35 pm
Hani Bashiir Fiyambaro liked this on Facebook.
Posska Farah Jama 11th November 2016 at 3:20 pm